Boky Lonavala Khandala Tour Package | Antsoy amin'ny: + 91-993.702.7574
Lonavala dia toerana fandevenana anaram-boninahitra toy ny vatosoa avy amin'ny Tendrombohitr'i Sahyadri akaikin'i Mumbai any Maharashtra. Ny Lonavala Khandala Tour Package dia manome fahafahana anao hahita zavatra mahafinaritra sy mahafinaritra, mitondra kitapo feno fahatsiarovana. Ny habetsahan'ny natiora amin'ny endriky ny riandrano, ny ala sy ny lohasaha, ny làlan-dranomasina, ny farihy ary ny lava-tany fahiny dia mahatonga ny paradisa mini Lonavala sy ny toerana tonga lafatra lavitra ny hatezerana sy ny fiainana an-tanàna. Ity dia dia hitondra anao amin'ny toerana izay misy tontolo maitso maitso, fomba fijery sy fiarovana izay voarakotry ny ahi-maitso manerana ny toerana. Lonavala dia velona mandritra ny monsoon season satria ny faritra ambanivohitra dia mamadika maitso maitso amin'ny riandrano sy dobo. Ny lozam-pifamoivoizan'ny Lonavala Khandala dia natao ho an'ny olona miandrandra ny handany fotoana ao amin'ny faritra mahafinaritra any andrefana. Ny ghats sy ny lohasahan'i Lonavala sy Khandala dia tena mahafinaritra sy milamina izay afaka mahatalanjona ny traikefa rehetra ataonao. Ny Lonavala Khandala Tour Package dia manome fialan-tsasatra tonga lafatra any amin'ny toerana mahafinaritra izay ahafahan'ny olona manana fotoana tsara indrindra amin'ny fiainany. Ny toeram-piantsoana ao Khandala dia nahita ny fiakarana sy ny fianjeran'ny fanjakana marobe toy ny Marathas, Peshwas ary na dia ny kolonialin'ny firenena eoropeana aza. Sand Pebbles Tour N Travel dia manolotra ny fivarotana 10% amin'ny fankalazana ny Andron'ny Fahaleovantena. Manolotra fampiantranoana Lonavala Khandala mahafinaritra ho an'ny mpivady, namana na fianakaviana isika.
Amin'ny fitsangatsangananay, afaka manana fialan-tsasatra amin'ny fiainanareo izay nofinofinareo rehetra izahay. Manome toky izahay fa hanana traikefa mahafinaritra mahatalanjona miaraka amin'ny fahatsiarovana mandritra ny androm-piainana iray manontolo.
Làlana mankany Lonavala - Khandala
03 alina / 04 Andro
Rehefa tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina ao Mumbai, maka sy miditra ao Lonavala. Rehefa tonga ny fahatongavanao, midira amin'ny hotely. Lonavala dia nanjary nalaza noho ny fanomezana natsangan'ny natiora toy ny: lohasaha, havoana, riandrano milomano, maitso maitso ary rivotra mahafinaritra. Ity faritra ity dia feno hatsarana voajanahary. Lonavala dia poezia iray noforonin'Andriamanitra. Ny masoandro maraina miposaka dia miseho toy ny hoe manondraka rano maniry foana. Ireo vorona mpihinam-bolo dia mamoha ny tenany ary ny rehetra dia mahatonga izany ho maraina tsara. Mandany andro fialan-tsasatra mandritra ny andro fialan-tsasatra ianao na azonao atao ny misafidy ny hijery ireo tsena ao an-toerana mba hankafy sakafo matsiro an'i Lonavala. Hijanona ao Lonavala.
Androany, handeha hamangy Bhushi Dam ianao, izay toerana malaza indrindra amin'ny tanàna iray manontolo. Toerana mahafinaritra ho an'ny picnickers izany. Misy riandrano mahavariana, akaikin'ny tohodrano, dia toerana malaza koa. Avy eo dia tsidiho ny Park Ryewood, izay miorina amin'ny tsenan'i Lonavala ary manolotra fomba fijery tsara. Mahazo tsara ny tanimboly ary hahita karazan-kazo sy voninkazo mamy. Taty aoriana dia nitsidika ny Farihy Tungarli, toeram-ponenana iray ao Lonavala ary loharano famatsiana rano ho an'ny tanànan'i Lonavala. Ny andro sisa dia miala voly ary rehefa avy nisotro ronono nandritra ny alina tao Lonavala.
Mandritra ny hotely. Aorian'ny sakafo maraina dia mitsidiha an'i Khandala (15 kms / 30 minitra). Amin'ny fandefasana toerana fitsangatsanganana toy ny: Karla Caves, Visapur Fort, Walwan Dam. Mankanesa ao Khandala ary ankafizo ny fomba fijery amin'ny toerana mahafinaritra amin'ny toetr'andro mahafinaritra. Miverina any amin'ny hotely fialantsasatra any Lonavala.
DAY 04: LONAVALA- MUMBAI (FIZARANA)
Andramo ny sakafo maraina, jereo tsara ny hotely. Mandehana mankany Mumbai mba hiverina any an-trano amin'ny lamasinina na ny sidina.